महिलाले यस्तो हर्कत गरेमा यी देशमा हुन्छ कडा सजाय !
एजेन्सी । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो महिलाका स्तनहरुले पुरुषहरुलाई आकर्षित गर्छन् । बच्चाका लागि स्तनपान गराउनु एउटा काम हो भने सेक्सका लागि पनि स्तनको प्रयोगलाई अति नै महत्वका साथ लिने गरिन्छ ।
समाजमा बिना कपडा हिन्न पाउने मागका साथ विभिन्न राष्ट्रहरुमा महिलाकर्मीहरुले क्याम्पिन नै चलाउने गर्छन् ।
तर, विश्वमा केही यस्ता राष्ट्रहरु रहेका छन् जहाँ स्तन देखाएमा कडा सजायको भागिदार हुनुपर्छ । महिला पक्षमा कानुन नभएको भन्दै बेलाबेला यस्ता देशहरुमा आन्दोलन समेत हुने गरेको छ । आउनुहोस् हेरौ महिलाले सार्वजनिक स्थलमा स्तन देखाएमा कस्ताकस्ता सजाय दिइन्छ यी देशहरुमा
यदी महिलाले सार्वजनिक स्थलमा स्तन देखाएमा यस देशको कानुन अनुसार ६ महिना जेल सजाय वा ६३४.८७ युरो जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
मेक्सिकोमा पनि खुलेआम स्तन देखाएमा कानुनी रुपमै कारबाही हुन्छ । यदी आमाले बच्चालाई खुलेआम स्तनपाउन गराउन छ भने लाइसन्स लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सन् २०१३ पश्चात यस विषयमा मेक्सिको सरकार लचिलो भएको देखिन्छ ।
टर्कीमा यदी सार्वजनिक स्थलमा महिलाले स्तन देखाएमा जरिवाना तिर्न लगाइन्छ । सन् २०१४ मा डेपुटी प्रधानमन्त्री बुलेन्ट एरिन्कले सार्वजनिक स्थलमा महिलाहरुलाई हाँस्न समेत प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव राखेका थिए ।
ब्राजिलको कानुन अनुसार यदी महिलाले सार्वजनिक स्थलमा स्तन देखाएर हिडेमा तीन महिना देखि एकवर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ ।
रसीयामा पुरुषहरुलाई माथि भागमा कपडाबिहिन भएर हिड्न कुनै रोकतोक छैन । तर, महिलाले त्यसो गरेमा ५० युरो जरिवाना तिर्न लगाइन्छ ।
मोनाकोमा सार्वजनिक स्थलमा स्तन देखाएमा मृत्युदण्डको सजाय दिने गरिन्छ ।
माल्टामा सार्वजनिक स्थलमा बक्षस्थल देखाएमा जरिवाना वा जेल सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
८. युनाइटेड अरब इमिरेट्स
युअइमा स्तन देखाएमा महिलालाई कम्तिमा ६ महिना वा सोभन्दा बढी जेल सजाय हुने नियम रहेको छ ।
पाकिस्तानमा तपाई स्मार्टफोन बोके झै बन्दुक लिएर हिड्न सक्नुहुन्छ । तर, सार्वजनिक स्थलमा महिलाले स्तन देखाएमा रु २०० जरिवाना तिर्न लगाइन्छ ।
सिंगापुरमा यदी महिलाले सार्वजनिक स्थलमा स्तन देखाएमा ९० दिन जेल सजाय वा २००० अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्न लगाइन्छ ।
सिरियामा महिलाले हिजाब लगाउन नमानेमा वा स्तन देखाएमा सार्वजनिक रुपमा त्यस्ता महिलाहरुको बेइज्जत गर्ने, पिट्ने, जरिवाना तिर्न लगाउने गरिन्छ । सिरियामा यस्ता कार्य पुर्णत भगवान विरोधी भएको मानिन्छ ।
थाइल्याण्डमा महिला वा युवतीले खुलेआम स्तन देखाएमा ९.५० पाउण्ड तिर्न लगाइन्छ । त्यतिनै रकममा एउटा यौनकर्मीले थाइल्याण्डमा पाइने गर्छन् ।
इराकमा पनि सिरियामा भएजस्तै नियम रहेको छ ।
इजिप्टका पुरातात्वयिक कलामा महिलाहरुले स्तन देखाएका धेरै दृश्यहरु रहेका छन् । तर, इजिप्टमा महिलाहरुले सार्वजनिक स्थलमा स्तन देखाएमा जेल सजाय हुने गर्छ ।
सुन्दर राष्ट्र, त्योभन्दा पनि सुन्दर महिलाहरु भएको राष्ट्र । सार्वजनिक स्थलमा महिलाहरुले स्तन देखाएमा यस देशको नियम अनुसार दुई वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ ।